Nilaza tamin’ny Israelita i Jeremia mba hitsahatra amin’ny fanaovan-dratsy. ‘Diso ireo andriamanitra ivavahan’ny firenena jentilisa’, hoy izy. Nefa Israelita maro no tia kokoa ny nivavaka tamin’ireo sampy fa tsy tamin’i Jehovah, ilay Andriamanitra marina. Rehefa nilaza tamin’ny vahoaka i Jeremia fa hofaizin’Andriamanitra izy ireo noho ny faharatsiany dia nihomehezany fotsiny izy.
Inona izao no hataon’i Jeremia? Tsy natahotra izy. Hoy ny teniny tamin’izy rehetra: ‘I Jehovah dia naniraka ahy mba hilaza ireo zavatra ireo aminareo. Raha tsy manova ny fomba ratsy fiainanareo ianareo, dia handrava an’i Jerosalema i Jehovah. Aoka ho azonareo antoka izao: Raha mamono ahy ianareo, dia hamono lehilahy iray tsy nanao ratsy akory.’
Hizara Hizara Lehilahy Iray Tsy Natahotra
my tant. 74